Politika avo lenta Miady an-trano ny mpitondra
Ny Rado Rafalimanana Nidoboka eny Antanimora
Nisy ny fisamborana an’Atoa Ny Rado Rafalimanana kandida ho filoham-pirenena teo aloha afak’omaly.
Antoko HVM Ataovy mangarahara ny fitantanana
Miatrika fotoan-tsraotra ny firenena ankehitriny. Manoloana izany, ny antoko Hery Vaovaon I Madagasikara (HVM) dia hitondra izay voatsirambin` ny tanana ho fanampiana ny mpiray tanindrazana manoloana ity ady iombonana ity.
Ny Rado Rafalimanana Nobedain’ny zandary teny Ivato
Nisy ny fisamborana an’Atoa Ny Rado Rafalimanana kandida ho filoham-pirenena teo aloha omaly. Tonga teny amin'ny CCI Ivato izy omaly maraina, nitondra ny zaodahiny avy any an-dafy atao fitiliana mikasika ny Covid-19 teny an-toerana.
Andry Rajoelina “Tena sarotra ny manapa-kevitra…”
Nametraka ny lamina rehetra saingy tsy vitan’ny mpitondra irery. Ny 12 andro manaraka dia tanjona ny hoe mba ho betsaka indray ny olona sitrana.
K3 F Miantso ireo mpanao politika tsy hanararaotra ny “coronavirus”
Nitondra hafatra ho an’ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena sy ho an’ny olom-pirenena sy ny vahoaka ny Komitin'ny Fahamarinana sy Fandriampahalemana ary Fiadanana (K3F) manoloana izao loza mihatra
Antsohihy Aro-vava miisa 2000 nozaraina tamin’iroe mpivarotra
Nitondra vahaolana ho fisorohana ny fiparitahan'ny Coronavirus ao Antsohihy ka nanome aro-vava miisa 2000 ho an'ny mpivarotra any an-toerana ny depiote, Jao Jean mivady.
Vondrona politika KOMBA “Fa iza marina no mibaiko ny Fokontany?” “
Hita ety ifotony fa mibaiko ny fokontany avokoa na ny Kaominina (izay misy rantsana maro), na ny Distrika, na ny Mpitandro ny filaminana, na ny solombavambahoaka , na ny Fiadidiana ny Repoblika,
Toekarena mihemotra, fiainana ara-tsosialy mihasarotra, tsy fandriampahalemana mampikolay, fiainana ara-politika tsy milamina, demokrasia voahitsakitsaka, diplomasia tsy mandeha
amin’izay laoniny … no mamaritra ny fiainam-pirenena ankehitriny. Betsaka ny fampanantenana saingy ny resaka no betsaka. Nambara fa efa niomana nandritra ny 4 taona ny filoha, efa vonona ny ekipa rehetra fa ny fahazoana fahefana sisa andrasana. Ny tranom-pody anefa no vita amin’ny vava, hoy ny fomba fiteny. Mitady “cerveaux” na olona manan-tsaina sy fahalalana afaka ny hanampy hivoahana amin’izao fahasahiranana sy tsy fahombiazana izao ny fitondram-panjakana. Zava-dehibe izany ary na tsy miaiky mivantana aza fa misy zavatra tsy mandeha eto dia efa fahatsapana lehibe io fa tena mihisatra na mikatso ilay masinina haingam-pandeha. Maro no tsy mahavita azy ao anaty fanjakana ao, ary toa sasatry ny mamono afo ny fanjakana eo anatrehan’ny olana misesisesy. Tsy tena hita ihany koa ny firaisankina sy firaisan-tsaina ao anaty fitondrana, hany ka ratsy endrika hatrany ny mpitondra. Nisy olana ny resaka vola tokony homena ny mpiasam-panjakana, dia minisitera na minisitra iray no hatao lasibatra sy henjehin’ny governemanta na minisitra hafa hatao sorona, kanefa ny rehetra samy voakasika daholo. Mandeha ny fifidianana, dia samy mandrotsaka ny olona ny lehiben’antoko sasany ao anaty governemanta tahaka ny MMM an’Atoa Hajo Andrianainarivelo sy ny Freedom an-dRamatoa Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy. Raikitra mihitsy ny gidragidra eo amin’ireo samy antoko ao anaty fitondrana, toy ny fifidianana any Faratsiho hifanolanan’ny IRD sy ny MMM. Samy te haneho ny tanjany sy hilaza fa manana olona sy fahefana hahafahana mitazona ny toerany na koa hanaovana takalon’aina ara-politika. Mety ho paikady politika, saingy taratry ny efa tsy firaisan-tsaina intsony fa toa samy mitady ny tombontsoany, dia samy mikepoka izay azony mba tsy hilazana fa mifanangana fanjakana kely ao anaty fanjakana be. Lojika raha mikatso ny firenena ary tsy ny mpanohitra no olana fa toa ireo manodidina ny filoha ihany no mety ho sakana ho azy.